Ugu yaraan 26 qof ayaa lagu dilay kaniisad ku taala magaalada Sutherland Springs oo ka tirsan gobolka Texas ee dalka Marayanka sida ay sheegeen Mas’uuliyiinta gobolkaas.
Arintan ayaa timid ka dib markii nin hubeysan uu rasaas ku furay dad isugu jira caruur, dhalinyaro iyo waayeel Wararku waxaa ay sheegayaan in 25 kale ay ku ku dhaawacmeen weerarka.
Magaalada uu weerarka ka dhacay ayaa qiyaasti konton kilomitir dhanka koonfur bari kaga began magaalada San Antonio. Booliska gobolka Texas ayaa warbaahinta maxaliga ee dalkaasi uu sheegay in raggii weerarka geystay la dilay, waxaana la arkayay muuqaalo muujinaya ciidamada ammaanka oo soo buux dhaafiyay goobta uu weerarka ka dhacay.
Gawaarida gurmadka degdega iyo kuwa dab damiska ayaa sidoo kale gaaray goobta, waxaana sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in dadkii halkaasi ku sugnaa la soo daad gureeyay.
Barasaabka gobolka Texas Mr Greg Abbot ayaa sheegay in hadda la tacaalayaan xaalada, waxaana weerarkan cambaareeyey madaxweyne Trump oo booqasho ku jooga dalka Japan.
Booliska ayaa sheegaya in weerarkan uu geystay askari ka tirsanaan jiray ciidamada Maraykanka oo shaqada laga eryey, lamana oga illaa hadda sababta uu dadka u laayey iyo waxa ku kalifay, waxaana socda baaritaano ay wadaan booliska.
WARKA 05 11 2017 Shirkii madaxda maamul goboleedyada & dowlada oo war murtiyeed & qodobo laga soo saaray